သငျသညျဧပြီလ7ဖြစ်ပျက်မှတ်မိပါသလား | Apg29
605 online! | Sidvisningar idag: 147 301 | Igår: 178 464 |
သငျသညျဧပြီလ7ဖြစ်ပျက်မှတ်မိပါသလား
သင်တစ်ဦးလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ဧပြီလ7ဖြစ်ပျက်မှတ်မိပါသလား
ယနေ့ဧပြီလ 7, ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစတော့ဟုမ်းအတွက် Drottninggatan ပေါ်တွင်မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ Isis terrorörelsenဖျော်ဖြေတဲ့သူတစ်ဦးကယုံမွတ်စလင်လူတဦးထရပ်ကားပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်သေခြင်းမှလူငါးဦးမောင်းဖူးပါလိမ့်မယ်။
ကနေဖြစ်သည့်အထက်ပါအတိုကလစ်, အဆိုပါဆွီဒင်ဒီမိုကရက် valfilm 2018, အထိတ်တလန်, ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်တွေးဝံ့စရာဖော်ပြသည်။
သားကောင်များ၏မိသားစုများဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ ဆွီဒင်ဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ အဆိုပါဆွီဒင်နိုင်ငံသားများအဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ မွတ်စ်လင်ဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ လူအပေါငျးတို့သညျယရှေု Give! သူတို့ကသညျယရှေုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်
ဒါ့အပြင်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစတော့ဟုမ်းအတွက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်မှာငါ့ Harrow ဆောင်းပါးနှင့်ထင်ဟပ်ဖတ်ရန်: စတော့ဟုမ်းအတွက်အကြမ်းဖက် - ထရပ်ကားလူအစုအဝေးသို့ကားမောင်း - သေလွန်သောသူတို့သည်အတော်ကြာ
အကြှနျုပျ၏ဆောင်းပါးငါနားလည်အဖြစ်စကားမစပ်, မွတ်စလင်မဟုတ်ခဲ့သူတစ်ဦးမုန်းသောသူအားဖြင့်ရဲကိုသတင်းပို့များသောအားဖြင့် vexatious တိုင်ကြားမှုများလုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါသတင်းစာကအာရုံကိုဆွဲငင်, ဒါပေမယ့်ရဲသင်တန်းဆင်းထားတော်မူ၏။ ဒါဟာဘလော့ဂ်တစ်ရက်ရှုမြင်သန်းတစ်နှစ်ခွဲကျော်စာမကျြနှာကြီးပြင်းကြောင်းထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့, တကရက်အနည်းငယ်ရှုမြင်ပင်သန်းနေတဲ့ကိုကျော်စာမကျြနှာမှတက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယေရှုခရစ်၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရာမေတ္တာရှင် budkskapet ပို. ပင်လူတွေကိုလမ်းကိုအပေါ်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်!
ဘုရားသခငျသညျလူအပေါငျးတို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ရန်နှင့်သမ္မာတရားကိုသိစေခြင်းငှါစေလိုသည်။ သငျသညျသေးကသိပ်နောက်ကျရရှိသွားတဲ့ရှေ့မှာလုပ်နေတာအဖြစ်ယေရှုလက်ခံရရှိပြီမဟုတ်ပါ။ ယရှေုသညျကောငျးကငျဘုံရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပါ!
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 464 918 627 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 131 bloggartiklar, 93 341 kommentarer och 61 360 bönämnen.